READ: Zimbabwe in hot soup again - Opera News
READ: Zimbabwe in hot soup again
It was bad news again for the Zimbabwean sports after it was announced that the senior national soccer team would be barred from hosting international matches for club and country at the National Sports Stadium.
The Zimbabwe National soccer team will only play against Ethiopia, after which CAF decided that no other match will be played until the stadium is declared ready.
The country of Zimbabwe is reported to have failed to upgrade its stadiums to meet international standards, leading to the recent decision by CAF. The Zimbabwe senior national soccer team is now out of the World Cup Qualifiers after losing to Ethiopia and Ghana .
It has not been good for the National soccer team .A media statement was released by ZIFA informing of the decision that had been taken by CAF.This means that there is a lot that that needs to be done by ZIFA to ensure that it gets cleared .
CAF Ethiopia World Cup Zimbabwe Zimbabwean